Faritra fanatanjahantena vokatra
Fitaovana fanatanjahan-tena anaty
Vokatra fanatanjahantena ety ivelany
Vokatra fampiroboroboana manokana
Fizarana Noely Noely
Agent Agent Sourcing ambony any Sina
Ny trano fanatobiana entana
Ny efitrano fampirantiana anay
Tsenan'ny Yiwu Online
Yiwu trano fandraisam-bahiny
Shantou tsenan'ny kilalao
Momba an'i Yiwu
Kitapo fitsapana antigen
1. Inona avy ireo entana azoko vidina amin'ny tsena ambongadin'i China?
1. Krismasy sy fety fety 2. Kilalao 3. Plastika sy entana ao an-trano 4. Entam-pandriana sy vera 5. boaty sy kitapo valizy 6. Fanaka sy fanaka ao an-trano 7. Kiraro sy kapa vita amin'ny hoditra 8. Fitaovana fitaovana 9. Fitaovana elektrika 10. Sekoly Mampiasà entana 11. Akanjo sy fitafiana 11. Takelaka fandriana sy firakofana fandriana 12. Fitaovana lamba 13. Entam-panatanjahantena 14. Famatsy biby 15. Be kokoa
Yiwu ho ivom-barotra lehibe indrindra eran-tany . Afaka mahita izay tadiavinao any ianao. Satria samy manana ny asany ny faritany tsirairay, noho izany dia nanangana birao tany Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou izahay hanomezana izay ilain'ny mpanjifa.
2. Manao ahoana ny serivisinao?
1. Vokatra loharano ilainao ary alefaso ny teny nindramina
2. Torolàlana ho an'ny tsena Yiwu sy fanaraha-maso ny orinasa
3. Mametraha baiko ary manaraha famokarana
4. Famerenana sy famolavolana ny vokatra
5. fanaraha-maso sy fifehezana kalitao
6. Serivisy fitehirizana sy fanamafisana maimaimpoana
7. Fampidinana manafatra
8 Tantano ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany
9. Fanesorana sy fandefasana entana
Afaka manao mihoatra ny noeritreretinao izahay
3. Rehefa mankany amin'ny yiwu aho, manao ahoana ny fiarahanay miasa?
1. Alefanao amiko ny fandaharam-potoanan'ny dia hataonao mba hanampiana anao hamandrika ny trano fandraisam-bahiny sy hitaterana
2. Hanangana mpiasa roa hanaraka anao izahay ary hiasa eny amin'ny tsena na orinasa
3. Handefa ny fampahalalana rehetra amin'ny alina izahay na hanonta ny antontan-taratasy amin'ny ny ampitso maraina.
4. Tokony handeha ho any amin'ny biraoko ianao hanamarina sy hanamafisana ny baiko alohan'ny handaozanao an'i Yiwu.
Isika handahatra ny zavatra rehetra mialoha, toy ny: trano fandraisam-bahiny, ny fitaterana, tehina, fitaovana (kasety, kahie, fakan-tsary etc ..), orinasa vaovao, vokatra vaovao eny ifotony. Mpanjifa aza manahy ny asa eo Yiwu.
4. Ny vidinao ve ambany noho ny mpamatsy 'Alibaba na Made in China?
Ireo mpamatsy amin'ny sehatra B2B dia mety ho orinasa, orinasam-barotra, mpanelanelana faharoa na fahatelo aza. Misy vidiny an-jatony amin'ny vokatra mitovy ary sarotra be ny mitsara hoe iza izy ireo amin'ny fizahana ny tranokalany. Mety ho fantatr'i Chine talohan'izay, tsy misy ny ambany indrindra fa ny vidiny ambany any Shina.
Izahay dia mitazona ny fampanantenanay fa ny vidiny voalaza dia mitovy amin'ny an'ny mpamatsy fa tsy misy fiampangana miafina hafa. Manolotra anao fomba mora kokoa hividianana entana amin'ny mpamatsy samihafa izay mety misy amin'ny tanàna samihafa izahay. Izany no tsy vitan'ny mpamatsy sehatra B2B satria mifantoka amin'ny vokatra tokana fotsiny izy ireo.
5. Haharitra hafiriana ny kaomiko?
. Ny fotoana anaterana azy dia miankina indrindra amin'ny lafin-javatra roa: ny fisian'ny entana sy ny serivisy fandefasana.
. Manome serivisy fitaterana isan-karazany ny mpanjifa, toy ny express, entana an-habakabaka, fitaterana an-dranomasina, fitaterana an-dalamby, FCL ary LCL.
6. Misy MOQ ve rehefa mametraka baiko avy aminao?
Raha manana tahiry ampy ny orinasa, azonay ekena ny habetsahana anananao;
Raha tsy ampy ny tahiry, ny orinasa dia hangataka amin'ny MOQ amin'ny famokarana vaovao.
7. Ahoana no fomba andoavantsika vola?
1. Aorian'ny fandefasana ny baiko dia mila mandoa 30% ny sandan'ny entana ianao tahaka ny deposti ho anay (ny vokatra fanoherana ny valanaretina dia mila mandoa 50% ny sandan'ny entana apetraka).
2. Manolora fehezan-dalàna momba ny fandoavam-bola, misy fe-potoana fandoavam-bola T / T, L / C, D / P, D / A, O / A dia misy amin'ny fangatahan'ny mpanjifanay.
8. Raha efa mividy any Chine aho, azonao atao ve ny manampy ahy hanondrana?
Eny! Aorian'ny fividiananao irery, raha manahy ianao fa tsy afaka manao izay takinao ny mpamatsy, dia mety ho mpanampy anao izahay hanosika ny famokarana, hanamarina ny kalitao, handamina ny fandefasana, ny fanondranana, ny fanambarana ho an'ny fadin-tseranana ary ny serivisy aorian'ny fivarotana. Azo ifampiraharahana ny saram-panompoana.
9. Nahoana ianao no mila mpandraharaha yiwu mpivarotra
1. Mihoatra ny 80% ny ozinina tsy manana fahazoan-dàlana manokana hanondrana
2. Ny ankamaroan'ny ozinina dia tsy ampy ny miteny Espaniôla & mpiasa miteny anglisy miasa miaraka amin'ireo mpividy ambaratonga kely ao Shina.
3. Ny ankamaroan'ny mpamatsy izay nohamarinin'izy ireo ho orinasam-barotra any Shina nefa mody tena izy izy ireo ary tsy afaka milaza amin'izy ireo ny mpanjifa amin'ny fampahalalana sandoka an-tserasera.
4. Noho izany ilaina ny fifanakalozana agents. Ny serivisy mpividy mpijanona tokana tsara dia tsy vitan'ny mampihena ny risika amin'ny fividianana avy any Shina fa mety hanampy anao koa amin'ny fotoana sy vola ary ezaka amin'ny fitrandrahana, fanamarinana, fifehezana kalitao ary serivisy aorian'ny fivarotana.
10. Inona avy ireo tanjanao?
1. Mihoatra ny 23 taona ny traikefa amin'ny masoivoho mpanafatra sy fanondranana
2. Manana mpiasa 1200 mahery. Maro amin'ireo mpiasanay no manana traikefa 10 taona mahery. Fantatr'izy ireo tsara ny tsena ary afaka mahita tsara ireo mpamatsy tsara foana izy ireo.
3. Ny vondrona misy anay dia nanorina fifandraisana ara-barotra marin-toerana amin'ireo orinasa sinoa mihoatra ny 10000 sy mpanjifa 1500 avy amin'ny firenena 120 mahery. Tahaka an'i Amerika, Brezila, Venezoela, Meksika, Kolombia, Arzantina, Espana, Peroa, Paragoay sy ny sisa
4. Any Yiwu, dia manana birao ao Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou
5. Manana efitrano fampirantiana mirefy 10.000 m² sy trano fanatobiana
be dia be Misy hery fanampiny mbola tsy notanisainay
11. Ahoana no ahatongavako any amin'ny tanànan'i Yiwu?
Ny Yiwu Tena akaiky amin'ny Shanghai sy Hangzhou, dia afaka mandray fiaran-dalamby haingam-pandeha na tanàna fiara fitateram-bahoaka avy any Shanghai, raha mila, isika koa dia afaka handamina ny fiara haka anao amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny yiwu koa ny fiaramanidina avy any Guangzhou tsipika, Shenzhen, Shantou sy Hong Kong.
12. Ahoana ny amin'ny filaminam-bahoaka ao Yiwu?
Ny tanàna Yiwu dia tena milamina sy milamina, ho hitanao ny vahiny maro mandehandeha na dia amin'ny misasakalina aza ny fotoana. Handeha amin'ny bar izy ireo na handray ny fety miaraka amin'ny namany.
Finday: +86 136 6582 2859 (whatsapp / wechat)
Valeria Masoandro (Español)